Xiaomi mandefa Mitu Children's Learning Watch 4Pro | Androidsis
Xiaomi koa dia nieritreritra ireo kely rehefa nandefa smartwatches vaovao. Ny orinasa dia nanambara tany Shina ny vaovao Mitu Children Learning Watch 4Pro, smartwatch izay ho tonga amin'ny loko roa fotsiny eny an-tsena, amin'ny aloky ny manga sy mavokely farafaharatsiny amin'ny fandefasana azy voalohany.
Ny fiambenana dia mampiseho fampisehoana rakotra 3ppi Gorilla Glass 1.78 326. Mety rehefa afaka mampiasa azy io ho toy ny mahazatra fa azo ovaina rehefa tonga miaraka amin'ny rafitra miasa namboarina sy mifototra amin'ny Android 8.1, ny sosona dia tena sariaka sy namboarina hatramin'ny voalohany nanombohany.
Xiaomi Mitu Children's Learning Watch 4Pro dia misongadina amin'ny vatany somary marefo, saingy tokony holazaina fa 920 mAh ny bateria tafiditra. Izy io dia manana fakantsary roa, iray amin'ny 5 megapixels, 82 degre f / 2.4 ary iray amin'ireo 8 megapixels 84.9 degre f / 2.2 miaraka amin'ny T-LENS mifantoka haingam-pandeha, samy azo ampiasaina rehefa te haka sary na horonantsary aza.
Mandalo ireo fitaovana anatiny, ity famantaranandro ity dia manampy RAM 1GB, fitehirizana 8GB ary Snapdragon Wear 2500 processeur. Izany dia ampiana ny fifandraisana 4G LTE, NFC ary GPS (tarika roa L1 + L5). Ny mpanamboatra dia nieritreritra ny afaka mampiasa azy io amin'ny antso an-tsary amin'ny alàlan'ny fametrahana sensor roa manana kalitao ampy.
El Ny Mitu Children's Learning Watch 4Pro dia mamela ihany koa ny rafitra fametrahana toerana, ankoatry ny safidy fanaraha-maso 24 hahafahan'ny ray aman-dreny mahalala amin'ny fotoana rehetra misy ny zanany. Izy io dia iray amin'ireo fiambenana miovaova be ho an'ny ankizy eny an-tsena ary misy famaranana tsara na dia be aza izany ny Mi Watch Color safidy hafa.
Xiaomi dia nanampy ny Xiaomi Voice Assistant sy ny fampiharana machine machine Ai ho fanao mahazatra, mamela ny fikarohana sary miaiky ny zavatra sy ny fandoavam-bola NFC. Ny famantaranandro dia azo jerena amin'ny vidin'ny CNY 1,299 any Shina (170 euro amin'ny tahan'ny fifanakalozana) ary mampanantena ny hanitatra ny famoahana azy tsy ho ela ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi dia mandefa Mitu Children's Learning Watch 4Pro